Ntuziaka 9-Nzọụkwụ iji mepụta Blog kachasị maka ọchụchọ | Martech Zone
Ọ bụ ezie na anyị dere Bloglọ ọrụ na-ede blọgụ maka mmadụ ihe dị ka afọ 5 gara aga, ntakịrị agbanweela na atụmatụ zuru oke nke ịre ahịa ọdịnaya site na ntanetị ụlọ ọrụ gị.
Dabere na nyocha, ozugbo ị dere ihe karịrị 24 blog posts, blọgụ okporo ụzọ na-abawanye site na 30%!
Ihe omuma a site na Mepụta Bridge na-ejegharị site na usoro ụfọdụ kachasị mma iji bulie blog gị maka ọchụchọ. Adịghị m ere na ọ bụ ihe kacha ndu… ma ọ bụ ezigbo mma.
Ntọala ha hapụ mmalite bụ iji hụ na ị na-ede ihe na sistemụ njikwa ọdịnaya ejiri chọọ maka ọchụchọ engines. Ide ederede ọdịnaya n'elu ikpo okwu bụ ịla oge na ọ ga-abụ nsogbu n'agbanyeghị otu ị si ede.
Ndụmọdụ ha bụ isi na infographic bụ dee ọdịnaya dị mma ma dee ya nke oma. Naanị nke ahụ enwetaghị gị na nsonaazụ njin ọchụchọ, n'agbanyeghị. Ikwesiri iwulite ikike n’elu oge ma ọdịnaya gị kwesịrị ịdị mma karịa nke ọma - ọ kwesịrị ịdị ịrịba ama. Ihe magburu onwe ya ọdịnaya na - ekekọrịta - ma na - eketa ọdịnaya na - ekekọrịta! Enwere otutu ọdịnaya dị mma ebe edepụtara nke ọma nke enweghị ike ịchọta na nsonaazụ ọchụchọ!
Ihe omuma ihe a na-ekwukwa na ị kwesiri inwe ma ọ dịkarịa ala Okwu 2,000 kwa post. Ekwenyeghị m obi m dum, ọnụọgụ a abụghị iwu na ọ bụ nnukwu ihe atụ nke mmekọrịta maka ihe kpatara. Onu ogugu okwu n’edere gi agaghi etinyere gi onodu. Imirikiti posts anyị dị n'okpuru okwu 2,000 ma anyị na-akwado usoro asọmpi.
Ekwenyere m na ndị mmadụ na-etinye ọtụtụ nyocha na atụmatụ n'ime ọkwa zuru oke dị ịrịba ama nwere ike ịnwe ohere ka mma ikesa ma debe ọdịnaya ahụ. Ogologo abụghị onye ọkwọ ụgbọala maka ogo ebe ahụ, ọ bụ ogo ọdịnaya. Achọrọ m ịhọrọ obere mkpirisi karịa karịa - ị chọghị ịgbanye ebe ị nwere ike ide obere.
Ndụmọdụ ndị fọdụrụ siri ike - imewe, ọsọ, nzaghachi, ojiji nke mgbasa ozi, mkpado aha, ndebanye aha email, ịkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya advice ndụmọdụ niile siri ike. Banyere mmejọ na ndudue asụsụ ụtọ - ekele dịrị ndị na-agụ m gbaghara m ebe ahụ. Ma oburu na onye dere akwukwo ozi a lere anya, ha gha achoputa ihe edere ede n’otu n’ime isi okwu ha!
Na njedebe, ọganiihu nke blọọgụ gị dabere na naanị otu ihe: Ma ị na-enye ndị na-ege gị ntị uru ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị dị, ị ga-ahụ ka blọọgụ gị na-eto ma na-eto eto n'ime nnukwu azụmaahịa azụmaahịa maka ụlọ ọrụ gị - ọkachasị site na ntanetị ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị naghị enye uru, ị ga-ada. Zọ na-ezighi ezi ma ọ bụ nke ziri ezi iji dee blog dịịrị ndị na-ege gị ntị, ọ bụghị ihe ọmụma a!
Tags: njehie asụsụ ụtọ asụsụndeghi ederedenjikarịcha blogịde blọgụ maka azụmahịaịde blọgụ azụmahịaflannery nke chantellecontent Marketingụlọ ọrụ blogụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummieskee akwadouglas karrinfographicsearch engine njikarịchamgbasa ozi mgbasa oziokwu blog post
ndepụta nzipu ozi
Dee 14, 2014 na 1: 17 AM
Nnukwu akwụkwọ ozi a masịrị m.
Dee 30, 2014 na 10: 06 AM
Nnukwu post nwere ọmarịcha onyonyo. Amaghị m ebe ị chọtara ha, mana ha dabara nke ọma! Ọrụ mara mma